News - Business Awaj
गुराँस लाइफ इन्स्योरेन्सले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको १० औं वार्षिक साधारणभा २०७७ मंसिर ०४ गते, कम्पनीको प्रधान कार्यालय, श्री राज भवन, तिनकुने, काठमाडौंमा विहान १०ः३० बजे हुने भएको छ ।
सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाखको १०.५०% बोनस सेयर पारित गर्नेछ । चुक्तापुँजी ९३ करोड ८५ लाखमा १ः१ हकप्रद जारी गरी नेप्सेमा सुचिकृत भई पुँजी १ अर्ब ८७ लाख कायम भएकोले उक्ता घोषित बोनस दर १०.५०% को ५०% अर्थात् ५.२५% बोनस वितरण गर्ने र बोनस सेयर जारी गर्दा लाग्ने दर प्रयोजनार्थ नगद लाभांश वितवरणको प्रस्ताव पारित गर्नेछ ।
साथै संचालक समितिको अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक बर्ष २०७४–७५ को बार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण उपर छालफल गरि पारित गर्ने छ ।
आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को लेखा परिक्षण गर्न लेखापरिक्षक को नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने छ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब ८७ करोड रहेको छ ।
सभा प्रयोजनको लागि २०७७ कार्तिक २० गते बुक क्लोज तोकेको छ । कार्तिक १९ सम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्र सभामा प्रतिनिधित्व गर्न पाउनेछन् ।
सिटिजन्स बैंकको लाभांश घोषण – बोनस सेयर कति ?
सिटिजन्स बैंकले आफ्नो सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७७ कात्र्तिक ०३ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मुनाफाबाट ७.७०% बोनस सेयर र ३.३० नगद लाभांश गरी कुल ११% लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त लाभांश नेपाल राष्ट्र बैंकबाट पारित गरी साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र पाउनेछन् ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापुँजी ९ अर्ब ०८ करोड रहेको छ ।
तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का – सिटिजन्स बैंकले प्राप्ति गर्ने
तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको सेयर कारोबार रोक्का भएको छ । यस बैंकलाई सिटिजन्स बैंक इन्टरनेशनलले प्राप्ति गर्ने भएको हो । दुवै बैंकको प्रतिनिधिहरुलाई एक्विजिशन गर्ने सम्बन्धमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति पत्रअनुसार स्वाप रेसियो १००ः९६ तय गरेको छ । तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको १०० कित्ता सेयर हुनेले सितिजन्स बैंकको ९६ कित्ता सेयर पाउनेछ ।
सिटिजन्स बैंकको पुक्तापुँजी ९ अर्ब ०८ करोड रहेको छ भने तिनाउ मिसन डेभलपमेण्ट बैंकको १ अर्ब ८१ लाख रहेको छ ।
शिवम् सिमेन्टको लाभांश पारित गर्न साधारणसभा आह्वान
शिवम् सिमेन्टस् लिमिटेडले वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ । कम्पनीको वार्षिक साधारणभा २०७७ कार्तिक २४ गते, कम्पनीको कर्पोरेट कार्यालय, अनामनगरको सभाहल, काठमाडौंमा विहान ११ बजे हुने भएको छ । सभामा सहभागी हुन सेयरधनीहरुलाई उपल्बध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।
सभाले संचालक समितिले प्रस्ताव गरेको आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को मुनाफाबाट चुक्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोडको २४ः२१% अर्थात् १ अर्ब ६ करोड नगद लाभांश पारित गर्नेछ ।
साथै संचालक समितिको अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत हुने आर्थिक बर्ष २०७६–७७ को बार्षिक प्रतिवेदन र लेखापरिक्षकको प्रतिवेदन, वित्तीय विवरण उपर छालफल गरि पारित गर्नेछ ।
आर्थिक बर्ष २०७७–७८ को लेखा परिक्षण गर्न लेखापरिक्षक को नियुक्ति तथा निजको पारिश्रमिक निर्धारण गर्नेछ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापुँजी ४ अर्ब ४० करोड रहेको छ ।
सभा प्रयोजनको लागि २०७७ कार्तिक १३ गते बुक क्लोज तोकेको छ । कार्तिक १२ सम्म कायम सेयरधनीहरुले मात्र सभामा प्रतिनिधित्व गर्न र लाभांश दावी गर्न पाउनेछन् ।
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ शुक्रबार बाँडफाँड हुने – ६ लाख बढीले सेयर नपाउने
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ शुक्रबार बिहान बाँडफाँड हुने भएको छ ।
बिक्रि प्रबन्धक एनआइसी एशिय क्यापिटलको अनुसार भोलि विहान ८ः३० बजे बाँडफाँड क्यापिटलको कार्यलयमा हुने भएको छ । इन्स्योरेन्सले असोज २१ गतेदेखि २५ गतेसम्म सार्वजनिक निष्काशन गरेको थियो ।
आलसम्मकै उच्च संख्याबाट आवेदक परेर रेकर्ड ब्रेक भएपछि न्यून संख्यामा मात्र शेयर पाउने भएका हुन् । यस आईपीओमा २७३,००० भाग्यशाली आवेदनले गोलाप्रथा मार्फत १० कित्ताका दरले सेयर पाउनेछन् । २५ गतेसम्ममा ८ लाख ८३ हजार ६२४ आवेदकबाट १ करोड ८९ लाख ७६ हजार ६० कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन दिएका छन् । ६ लाख बढी आवेदकले सेयर नपाउने भएको छ ।
कम्पनीले ३०% अर्थात् ३०,००,००० कित्ता आईपीओ सेयर प्रतिकित्ता रु. १०० रुपैयाँका दरले सर्वसाधारणलाइ निष्काशन गर्नेछ । जसमध्ये ४% अर्थात् १२०,००० कित्ता कर्मचारीलाई र ५% अर्थात् १५०,००० कित्ता सामुहिक लगानीकोषहरुलाई बाँडफाँड गरी बाँकी रहेको २७,३०,००० कित्ता सर्वसाधारणलाई निष्काशन गरेको थियो ।
शिवम् सिमेन्टको लाभांश प्रस्ताव
शिवम् सिमेन्टले आफ्नो सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७७ असोज २८ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मुनाफाबाट २४.२१% अर्थात् १ अर्ब ६ करोड नगद लाभांश कर सहित प्रस्ताव गरेको छ ।
उक्त लाभांश साधारणसभाले अनुमोदन गरेपछि मात्र पाउनेछन् ।
नेप्सेमा १६ लाख ३५ हजार कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से)मा १६ लाख ३५ हजार कित्ता बोनस सेयर कारोबारको लागि सुचिकृत भएको छ ।
नेप्सेको अनुसार स्वालम्बन लघुवित्त बित्तीय संस्था लिमिटेडको २६% अर्थात् १६ लाख ३५ हाजर १०९.८४ कित्ता बोनस सेयर सुचिकृत भएको हो । यस बोनस आर्थिक वर्ष २०७५र७६को नाफाबाट वितरण गरेको हो ।
उक्त सेयर लगानीकर्ताहरुको डिम्याड खातामा आएपछि कारोबार गर्न सक्नेछन् ।
सानिमा बैंकको बोनस सेयर घोषणा
सानिमा बैंकले आफ्नो सेयरधनीहरुलाई आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मुनाफाबाट लाभांश प्रस्ताव गरेको छ ।
२०७७ असोज २७ गते बसेको संचालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६र७७ को मुनाफाबाट १०% बोनस सेयर र ३।६०५ नगद लाभांश कर सहित प्रस्ताव गरेको छ ।
हाल यस कम्पनीको चुक्तापुँजी ८ अर्ब ८० करोड रहेको छ ।
जनरल इन्स्योरेन्सको आइपीओ सेयर नेप्सेमा सुचिकृत – कतिमा खुल्छ पहिलो कारोबार
जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपालको आइपीओ सेयर कारोबारको लागि नेप्सेमा सुचिकृत भएको छ । कम्पनीले आइपीओ असोज ११ देखि १४ गते सम्म जारी गरेको थियो ।
कम्पनीको कुल १ करोड कित्ता सेयर कारोबारको लागि नेप्सेमा सुचिकृत भएको छ । यस कम्पनीको कारोबार भोली देखि नै हुने भएको छ । कारोबार संकेत जिआईसी (GIC) रहेको छ भने सुरुवाती कारोबार रेन्ज १०१.७६ –३०५.२८ तोकिएको छ ।
आईपीओ निष्काशन पश्चात यस कम्पनीको चुक्तापुँजी १ अर्ब पुगेको छ।